GV Mpisolovava · Oktobra, 2020 · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny GV Mpisolovava tamin'ny Oktobra, 2020
Azia Atsinanana23 Oktobra 2020
Azia Atsinanana21 Oktobra 2020
Azia Atsinanana20 Oktobra 2020
Tsy mila fahalalahana ho an'ny tenako irery aho, ho mora loatra izany. Mila zavatra lehibe kokoa aho: fahalalahana sy demaokrasia ho an'i Vietnam manontolo. Mety hitovy amin'ny tanjona lehibe iray io, saingy azo tanterahana feno, miaraka amin'ny fanohananareo.
Amerika Avaratra14 Oktobra 2020
Azia Atsinanana09 Oktobra 2020
"Sahy nijoro niaro ny tontolo iainana i Muay. Tsy mendrika ny hampidirina am-ponja noho ny fahasahiany mijoro i Muay."
Okraina04 Oktobra 2020
Ny fombany tsy mitsitsy teny manohitra izay heveriny ho toy ny fibodoana tsy ara-dalàna ataon'i Rosia ao Krimea toerana nahaterahany dia nahatonga an'i Liza Bogoutskaïa ho olona iray ankafizin'ireo mpomba an'i Okraina ety anaty tambajotra. Fa izany koa anefa dia nahatonga azy ho fahavalon'ny fanjakana rosiàna
Nosakanana ny tranonkala nampiseho ny fanaovan'ny miaramila kolikoly any Myanmar
Azia Atsinanana02 Oktobra 2020
"Asehon-dry zareo ny fitomboan'ny tsy fandeferan'ny governemanta manoloana ny fahalalahana maneho hevitra izany ary miezaka manafina ny heloka bevava sy ny kolikoly ataon'ny miaramila. "